Ndị Izrel rutere n’Ugwu Saịnaị (1-25)
Izrel ga-abụ alaeze nke ndị nchụàjà na-achị na ya (5, 6)
E mere ka ndị Izrel dị nsọ maka ịbịakwute Chineke (14, 15)
19 N’ọnwa nke atọ mgbe ndị Izrel pụtachara n’Ijipt, n’otu ụbọchị ahụ, ha batara n’ala ịkpa Saịnaị. 2 Ha si na Refidim+ kwalie bata n’ala ịkpa Saịnaị ma maa ụlọikwuu n’ala ịkpa ahụ. Ndị Izrel mara ụlọikwuu n’ebe ahụ n’ihu Ugwu Saịnaị.+ 3 Mosis wee gbagoro n’ugwu ahụ ka ọ gakwuru ezi Chineke. Jehova sikwa n’ugwu ahụ gwa ya,+ sị: “Ị ga-agwa ezinụlọ Jekọb, bụ́ ndị Izrel, sị, 4 ‘Unu ejirila anya unu hụ ihe m mere ndị Ijipt,+ ka m wee buru unu butere onwe m otú ugo si eji nku ya ebu ụmụ ya.+ 5 Ugbu a, ọ bụrụ na unu ga-erube isi n’ihe niile m kwuru ma ghara imebi ọgbụgba ndụ mụ na unu ga-agba, unu ga-abụrụ m ndị pụrụ iche n’ime ndị niile ọzọ,+ n’ihi na ọ bụ m nwe ụwa niile.+ 6 Unu ga-abụrụ m alaeze nke ndị nchụàjà na-achị na ya nakwa mba dị nsọ.’+ Ọ bụ ihe ndị a ka ị ga-agwa ndị Izrel.” 7 Mosis gara kpọọ ndị okenye ndị Izrel ma gwa ha ihe niile a Jehova nyere ya n’iwu.+ 8 Mgbe e mechara, ha niile ji otu olu zaa, sị: “Anyị ga-eme ihe niile Jehova kwuru.”+ Ozugbo ahụ, Mosis gaghachiri gwa Jehova ihe ha kwuru. 9 Jehova gwara Mosis, sị: “Lee, m ga-abịakwute gị n’ígwé ojii, ka ndị Izrel nụ mgbe m ga-agwa gị okwu, ka ha wee nwee okwukwe na gị mgbe niile.” Mosis wee gwa Jehova ihe ndị Izrel kwuru. 10 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Gakwuru ndị Izrel. Jiri taa na echi mee ka ha dị nsọ, ha ga-asakwa ákwà ha. 11 Ha ga-ejikere maka ụbọchị nke atọ, n’ihi na n’ụbọchị nke atọ, Jehova ga-agbadata n’Ugwu Saịnaị n’ihu ha niile. 12 Ị ga-akpara ndị Izrel ókè gburugburu ugwu a ma sị ha, “Lezienụ anya ka unu ghara ịgbago n’ugwu a, ka ahụ́ unu gharakwa imetụ n’akụkụ ya. Onye ọ bụla ahụ́ ya metụrụ n’ugwu a, a ga-egburịrị ya. 13 E nweghị onye ga-emetụ onye ahụ aka, kama a ga-atụ ya nkume ma ọ bụ jiri akụ́ gbagbuo ya.* Ọ gaghị adị ndụ, ma ọ̀ bụ mmadụ ma ọ̀ bụ anụmanụ.’+ Ma ha nwere ike ịgbagote n’ugwu a mgbe a fụrụ opi.”*+ 14 Mosis wee si n’ugwu ahụ gbadaa gakwuru ndị Izrel. Ọ malitere ime ka ha dị nsọ, ha sakwara ákwà ha.+ 15 Ọ gwara ha, sị: “Jikerenụ maka ụbọchị nke atọ. Unu na ndị nwunye unu enwekwala mmekọahụ.”* 16 N’ụtụtụ ụbọchị nke atọ, égbè eluigwe gbawara, àmụ̀mà ana-egbukwa, ígwé ojii+ kpuchikwara ugwu ahụ, a nụwakwara ụda opi na-adasi ike. Ndị Izrel niile nọ n’ebe ha mara ụlọikwuu wee malite ịma jijiji.+ 17 Mosis sizi n’ebe ahụ ha mara ụlọikwuu kpọpụta ha ka ha bịakwute ezi Chineke. Ha wee guzoro n’ala ala ugwu ahụ. 18 Ugwu Saịnaị niile kwụrụ anwụrụ ọkụ n’ihi na Jehova ji ọkụ gbadata na ya.+ Anwụrụ ọkụ sikwa na ya na-akwụgo elu ka anwụrụ ọkụ si ná nnukwu ekwú, ugwu ahụ niile nọkwa na-amasi jijiji ike.+ 19 Mgbe opi ahụ dasiwekwuru ụda ike, Mosis kwuru okwu, olu ezi Chineke wee zaa ya. 20 Jehova wee gbadata n’Ugwu Saịnaị, n’elu ugwu ahụ. Jehova kpọrọ Mosis ka ọ bịa n’elu ugwu ahụ, Mosis agbagoro.+ 21 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Gbadaa, dọọ ha aka ná ntị ka ha ghara isi ọnwụ bịa ka ha lee Jehova anya, ma ọ́ bụghị ya, ọtụtụ n’ime ha ga-anwụ. 22 Ka ndị nchụàjà, bụ́ ndị na-abịa Jehova nso mgbe niile, doo onwe ha nsọ, ka Jehova ghara igbu ha.”+ 23 Mosis wee sị Jehova: “Ndị Izrel enweghị ike ịgbagote n’Ugwu Saịnaị maka na i burula ụzọ dọọ anyị aka ná ntị, sị, ‘Kpaa ókè gburugburu n’ugwu a, meekwa ka ọ dị nsọ.’”+ 24 Ma, Jehova sịrị ya: “Gawa, gbadaa, e mechaa gị na Erọn agbagote. Ma ekwela ka ndị nchụàjà na ndị ọzọ sie ọnwụ ka ha bịakwute Jehova, ka ọ ghara igbu ha.”+ 25 Mosis wee gbadaa gakwuru ndị Izrel ma gwa ha ihe Chineke kwuru.
^ O nwere ike ịbụ, “jiri ube magbuo ya.”
^ Na Hibru, “opi e ji mpi ebule mee.”
^ Na Hibru, “Unu agala nwaanyị nso.”